ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: ခရမ်းပြာအတွက် ချောကလက်ကပေးသော နောက်ဆုံးပျော်ရွှင်မှု
ခရမ်းပြာအတွက် ချောကလက်ကပေးသော နောက်ဆုံးပျော်ရွှင်မှု
သူမ ရဲ့ လက်တွေက ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ နှေးကွေးလေးလံစွာ ယိမ်းနွဲ့လှုပ်ရှားနေသည်။ ကွန်ပျူတာကို ခုမှစသုံးဖူးပြီ ချက်တင် ဆိုတာကိုလည်း ခုမှသာ ထိုင်ပြီးစကား စပြောဖူးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နေကုန် အိမ်လေးထဲက သူမ၏ အိပ်ခန်းလေးထဲမှာသာ အချိန်ကုန်နေရသူ သူမအတွက် အပျင်းပြေစေရန် ရည်ရွယ်ပြီးအဖော်မွန်အဖြစ် အစ်မက ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ဆင်ပေးခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာ အသုံးပြုပုံနှင့် အင်တာနက် အကြောင်း အနည်းအကျဉ်း သင်ပြပေးခဲ့သည် ။ ထို့နောက် သူမကို ချောကလက်မြို့တော် ဆိုက်လေးထဲသို့ နံမည် လှလှလေး တစ်ခုပေးပြီး အကောင့်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ သူမ အတွက်တော့ ချောကလက် မြို့တော်လေးသည် စိတ်အပန်းဖြေစရာဖြစ်သလို ပျော်ရွှင်စွာ ခိုလှုံရာလေးလည်း ဖြစ်စေခဲ့ပါတော့သည်။ ချောကလက် မြို့တော်လေးထဲက သူငယ်ချင်းများကိုလည်း အပြင်မှာ မတွေ့ဘူး မမြင်ဘူးရပေမဲ့ သူမ သံယောဇဉ်ဖြစ်ပြီး ခင်မင်နေမိပါသည်။ သူမ အိမ်လေးသို့ ပုံလှလှလေးတွေနှင့် လာလည်သွားတာ တွေ့လိုက်ရရင် ပျော်လို့မဆုံး၊ ပုံလေးတွေကိုလည်း ကြည်လို့မဝ ဖြစ်ရကာ မြို့သူမြို့သားတို့၏ နွေးထွေးသော ခင်မင်မှုများကို ရင်ထဲမှာ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားမိခဲ့သည်။
ကွန်ပျူတာ ကို သိပ်မကျွမ်းကျင်လှသော သူမကတော့ အလည်လာသွားသော သူငယ်ချင်းမျာဆီသို့ ပုံမပါဘဲ စာလေးတွေနဲ့သာ ပြန်လည်ပြီး အလည်ရောက်သွားတတ်ပါသည်။ သူမ အတွက် ချောကလက် မြို့တော်လေးထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လည်း ရှိပါသေးသည်။ သူမ၏ အိမ်လေးကို နေ့တိုင်း ထူးထူးဆန်းဆန်းပုံလေးတွေနှင့်အတူ ဘော်ဒါကြီးရေ ဟုခေါ်ကာ ရောက်ရောက်လာတတ်ပြီး လစ်ပြီဟု ဆိုကာပြန်သွားတတ်သည့် ညသခင် ဆိုသည့် သူငယ်ချင်းဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ အပြင်မှာ မတွေ့မြင်ဘူးပေမဲ့ သူမ ရင်ထဲမှာ သူကို လှိုက်လှဲစွာ ခင်မင်မိပါသည်။ သူငယ်ချင်း အားလုံးအပေါ် နွေးထွေးဖော်ရွေပြီး ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ သူရဲ့အပြု အမှုလေးကို သူမသတိထားမိကာ သဘောကျပြီး ဖြူစင်စွာ ခင်မင်ခဲ့မိသည်။ထို့ကြောင့် သူအိမ်လေးကိုလည်း သူမ အမြဲလို အလည် ရောက်သွားတတ်သည်။ ထို့နောက်မှာတော့ သူငယ်ချင်းတွေ ရေးထားသော ပို့စ်လေးမျာကို ဖတ်နိုင်သလောက် ဖတ်ပြီး ကော်မန့်လေးတွေ ပေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ ကိုယ်တိုင်လည်း စာတွေရေးပြီး ပို့စ်လေးတွေ တင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ ရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကဖတ်ပြီး ကော်မန့် လှလှလေးတွေ ပေးထားခဲ့လျှင် သူမ မှာ ဖတ်လို့မဝ ပျော်လို့ မဆုံးနိုင်အောင် ဖြစ်နေပါတော့သည်။
ချောကလက် မြို့တော် ဆိုက်လေးမှာသာ ဝင်ထားခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ဒီမြို့တော်လေးနှင့် မြို့တော်လေးထဲက သူငယ်ချင်းများသာ သူမ အတွက်ခင်တွယ်စရာ ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ နေရာလေးတစ်ခု ဖြစ်တည်ခဲ့ပါတော့သည်။ ထို့နောက် သူမ ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာနှင့် စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ကိုအတတ်နိုင်ဆုံး မေ့ဖျောက်စေဖို့ စာတွေဖတ် စာတွေရေး သည့်အပြင် ဂျီတော့ကနေ ချက်တင် ထိုင်ပြီး စာတွေရိုက်ကာ စကားတွေလည်း ပြောနေတတ်ပါသေးသည်။ သူမကို အင်တာနက်သုံးတတ်အောင် သင်ပြပေးခဲ့သူ သူမရဲ့ အစ်မက သူမကို အွန်လိုင်းတက်ရင် ချက်တင်မှာ ဘယ်တော့မှ ကိုယ်အကြောင်း၊ နာမည်၊ နေတဲ့နေရာကို အမှန်အတိုင်း မပြောပါနှင့် အွန်လိုင်းလောက က ရှုပ်ထွေးပြီး အလိမ်အညာတွေများလွန်းတဲ့အတွက် VZO နှင့် ဖုန်းကိုလည်း မသုံးပါနှင့် ညီမလေး ကိုဒဏ်ရာတွေဖြစ်သွားမှာ ခံစားမှုတွေ ဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ ဟုဆိုပြီး သူမ ထံ ဂတိတောင်းပြီး တားမြစ်ထားခဲ့ပါသည်။ သူမ ကိုယ်တိုင်လည်း သူမရဲ့ အကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မသိစေချင်တဲ့သူမို့ အဲ့ဒီဂတိကို အလွယ်တကူ ပေးလိုက်ပြီး ချက်တင်စထိုင်ကာ မတွေ့ဘူး မမြင်ဘူးတဲ့ သူများနှင့် အွန်လိုင်းမှာ စာရိုက်ပြီး စကားပြောခြင်းကို စတင်ပါတော့သည်။
ကိုယ့် ဘဝအကြောင်း ကိုယ်နေတဲ့နေရာ ကိုယ့်နာမည်ကိုတောင် အမှန်အတိုင်း မပြောချင်ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ ဂျီတော့ ပေါ်မှာ အခြားသူများနှင့် စကားပြောလျှင် ဘုကလန့် စကား ကိုးလိုးကန့်လန့် စကားလုံးများသာ ထွက်ကျလာတတ်သည်။ တစ်ချို့ကျတော့ ဘုကလန့် စကားတွေ ပြောတတ်တဲ့ သူမ ကို အပြစ် မမြင်ဘဲ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားခင်မင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများရှိကြသလို၊ အချို့ကျတော့လည်း “ မင်းဟာ တကယ့် လူထူးလူဆန်း တစ်ယောက်ဘဲ ” ဟုဆိုကာ စိတ်ဆိုးသွားကြတဲ့ သူတွေလည်း ရှိကြပါသည်။ ထို့နောက် နှမချင်း မစာနာ စွာဖြင့် ဒေါသတကြီး မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲဆိုသွားကြတဲ့ သူများကိုလည်း မကြာခဏ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသေးသည်။ အဲ့ဒီလို လူမျိုးများကို တွေ့ရတော့ သူမ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး အပြီးတိုင် ဘလော့ ထားလိုက်ပါတော့သည်။ သို့သော် သူမ ဖြေသာပါသည်။ သည်းခံစိတ် မရှိတဲ့သူ အောက်တန်းကျတဲ့သူ မိုက်ရိုင်းတဲ့သူများနှင့် သူမ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း မဖြစ်လိုက် ရသည်က ကံကောင်မှု ဟုယူဆလိုက်တော့ သူမစိတ် ပေါ့ပါးကျေနပ်သွားခဲ့မိပါတော့သည်။ တဆက်တည်း သူမ ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက နောက်ဆုံးတော့ သူမ အပေါ် သည်းခံနိုင်သောသူ နာလည် ပေးနိုင်သောသူ စိတ်သဘောထား မြင့်မြတ်သောသူ သူမကို တကယ် ခင်မင်ကြသော သူများသာ ကျန်နေလိမ့်မည်ဟု သူမက ယူဆထားလိုက်ပါတော့သည်။ သူမ ယူဆထားခဲ့သည့် အတိုင်းလည်း ခင်မင်စရာကောင်းသော သူငယ်ချင်များ ရန်ဖြစ်ဖော်များ ရခဲ့ပါသည်။
ဒီလိုနှင့် တစ်နေ့မှာတော့ သူမရဲ့ဘဝမှာ မျော်လင့် မထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု အမှတ်မထင် ဖြစ်ပျက်လာခဲ့ပါတော့သည်။ သူမရဲ့ ဘုကလန့် စကား၊ ခပ်ရင့်ရင့် စကားများကို စိတ်မဆိုးဘဲ သည်းခံပြီး ပြန်လည် နောက်ပြောင် ကျီစယ်တတ်သော ကောင်းကလေး ၅ ယောက်နှင့် သူမ ခင်မင်ခဲ့မိသည်။ သူတို့ကတော့ သူတို့၏ နာမည် သူတို့၏ အကြောင်းတွေကို ပွင့်လင်းစွာပြောပြတတ်ပြီး သူမ ရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်း မေးတတ်ပါသည်။ သူမက မဖြေဘဲ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေတတ်သည်ကိုလည်း နားလည်ပေးကာ “ ဘာဖြစ်လဲ နာမည် နေတဲ့နေရာသိမှ ခင်လို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုလည်း ခင်လို့ဖြစ်ပါတယ်” ဟုဆိုကာ အမည်မပြောတဲ့သူမ ကို သူတို့က တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ နာမည်ပေး ကင်ပွန်းတတ် ကြပါတော့သည်။ တစ်ယောက်က သူမကို ဘွားဘွား ဟုခေါ်ပြီး နောက် တစ်ယောက်ကတော့ အပျိုကြီး ဟု ခေါ်တတ်ပါသည်။ နောက်ထပ် တစ်ယောက်ကတော့ မကြီး ဟု ခေါ်ပြီ ကျန်နှစ်ယောက်ကတော့ မမ ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြပါတော့သည်။ ဘွားဘွား ရေ ဟု ခေါ်ပြီး ချွဲတတ်သော ကောင်လေးကို သူမက သားသားရေ ဟုပြန်ခေါ်ကာ စနောက်တတ်သလို အပျိုကြီး ဟုခေါ်သော ကောင်းလေးကိုလည်း ဘုကလန့် စကားတွေ ပြန်ပြောမိတတ်ပါသည်။
ထို့နောက် သူကို မကြီး ဟုခေါ်ပြီး အမြဲရစ်တတ်တဲ့ ဂျစ်ကန်ကန် ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလည်း သူစိတ်ကျေနပ်သွားအောင် အရစ်ခံပေးပြီး သူမကလည်း ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့ ပြန်လည်ရစ်တတ်ပါသေးသည်။ အဲ့ဒီအခါကျရင်တော့ သူက “မကြီး ပြောတာသိပ်တရားလွန်တာဘဲ ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ မဘလော့ချင်ဘူး… မကြီးဘက်က ဘလော့လိုက်ဗျာ” ဟု စိတ်ဆိုး မာန်ဆိုးဖြင့် ပြောတတ်ပါသည်။ ဒီလို အခြေအနေလေး တင်းမာလာရင်တော့ သူမက လေပြေလေးနဲ့ ပြန်လည် ချော့မော့ကာ တောင်းပန်ရပါသေးသည်။ ထို့နောက် မမ ဟုခေါ်ပြီး စတတ်သော ကောင်လေးနှစ်ယောက် ၊ သူတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ သူများတွေထက် သူတို့ကို ပိုပြီး ခင်စေချင်ကာ ဘုကလှန်စကားတွေထက် စကားကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတွေဘဲ ပြောစေချင်ခဲ့တဲ့ သူလေးတွေဘဲ ဖြစ်ပါသည်။ သူမကတော့ ကိုယ့်အကြောင်း မသိစေချင်ခဲ့တဲ့ အတွက် စကားအကောင်းများထက် ဘုကလန့် စကားများသာပြောတတ်ခဲ့သည်။ ထိုအတွက် တခါတလေ စကားများရန်ဖြစ်ပြီး စိတ်ကောက်ကာ မခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ အချိန်တွေလည်း ရှိတတ်ပါသေးသည်။
နေ့ရက် အချိန်လေးတွေကြာလာတော့ သူတို့လေးတွေကို သူမ မှတ်မှတ်ထင်ထင် ရှိလာပါတော့သည်။ သူတို့ ၅ ယောက်လုံးက အသက်တွေလည်း ရွယ်တူလေးတွေ ဖြစ်ကြသလို သူတို့ ကျောင်းတက်နေကြတဲ့ နိုင်ငံလည်း တူညီနေပြီး အွန်လိုင်း တက်ချိန်တွေပါ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် တူညီနေကာ လူငယ်သဘာဝ “ ဒီနေ့တော့ စိတ်ညစ်နေလို့ အရက်သောက်တော့မယ်ဗျား” ဆိုတဲ့ စကားတွေအထိပါ တူညီနေကြတော့ သူမ သံသယ ဝင်လာမိတော့သည်။ တစ်ယောက်တည်းက ဒါမှမဟုတ် နှစ်ယောက်လောက်က အကောင့်တွေ အများကြီး ဖောက်ပြီး သူမကို သက်သက် အရူးလုပ်နေတာလား ဟုတွေးမိလိုက်တော့ ဒေါသ ထွက်မိပါတော့သည်။
တစ်နေ့တော့ သူမကို မမ ဟုခေါ်သော ကောင်လေး တစ်ယောက်က သူမ အကြောင်းတွေကို စေ့စေ့စပ်စပ် မေးလာပါတော့သည်။ သူမ ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူမ အကြောင်းကို မပြောပြချင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘုကလန့် စကားများနှင့် ခပ်ရင့်ရင့် စကားများသာ ပြန်ပြောမိခဲ့ပါသည်။ သိချင်တာကို မသိရဘဲ စကားလုံး ခပ်မာမာတွေသာ ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် သူ အတော်လေး စိတ်ဆိုးသွားကာ သူမကို ပြန် ရွဲ့ ပြီး ဘုကလန့် စကားတွေ ပြန်လည် ပြောဆိုလာပါတော့သည်။ ထို့နောက် သူမနှင့် ထိုကောင်လေး ဂျီတော့ ပေါ်မှာ အကြီးအကျယ် စကားများကြပါတော့သည်။ နောက်ဆုံး သူမ စိတ်ဆိုးပြီး သူ့ကို ဘလော့ လုပ်လိုက်ပါတော့သည်။ ခဏလောက်ကြာတော့ အွန်လိုင်းပေါ်က မြေးလေး “ သား” က “ဘွားဘွား... နေကောင်းလား”ဆိုပြီး နုတ်ဆက်လာတာ တွေ့လိုက်ရပါသည်။ သူမ ဒေါသ အရှိန်မသေသေး။ ထို့ကြောင့် အစောပိုင်းက သူမ နှင့် ကောင်လေး ရန်ဖြစ်ထားခဲ့သော စာကို“ သား ”ထံ ပို့ပေးလိုက်ပြီး“ အဲ့ဒီကောင်လေး ကိုသိလား” ဟု မေးလိုက်ပါသည်။ သား က ဂျီတော့ ပေါ်မှာ “ ဟဟဟ” ဆိုတဲ့စကားလုံးနှင့်အတူ “မသိပါဘူးဘွားဘွား ” ရယ်ဟု ပြန်ပြောလာပါသည်။ သူမက “ဒါဆိုဘာ့ကြောင့် မင်းကရယ်တာလဲ” ဟုပြန်မေးတော “ဘွားဘွားလှော်ချက်တွေ က မိုက်လွန်းလို့ပါ။ ကောင်းတယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းကို ဘလော့လိုက့် ဘွားဘွား ကို သက်သက်စောကားတာ ” ဟုဆိုပြီး “ဟားဟားဟား ” ဆိုတဲ့ ရယ်သံစွဲလေးက ပါလာပြန်သည်။ သူမစိတ်ထဲ ပိုပြီး မသင်္ကာဖြစ်လာပါတော့သည်။
ထို့နောက် .. မကြီး ဟုခေါ်သော ကောင်လေးတစ်ယောက် ပေါ်လာပြန်သည်။ “ကျွန်တော် မူးနေလို့ မကြီးကို ရစ်မယ်ဗျား” ဟုဆိုကာ သူမကို စကားလုံးများဖြင့် ရစ်နေပါတော့သည်။ ထို့ပြင် “မကြီး ကျွန်တော့ကိုခင်ရင် အဲ့ဒီ ဗီဒီယို လေးကြည့် ” ဟုဆိုကာ “ စိတ်ညစ်နေလို့ သွားတော့မယ်ဗျား”ဟု ပြောပြီး ပျောက်သွားပါတော့သည်။ သူ ပို့ထားသော ဗီဒီယိုလေးကို ဖွင့်ကြည့်မိလိုက်တော့ သူမ အလွန်ဘဲ ကြောက်လှန့်ပြီး တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားသွားခဲ့ရပါတော့သည်။ သူပို့လိုက်သည်မှာ လူတစ်ယောက်ကို ရက်ရက်စက်စက် အရှင်လတ်လတ် ခေါင်းဖြတ်သတ် နေတဲ့ ပုံတွေဘဲ ဖြစ်ပါတော့သည်။ သို့သော် သူမက သူ ကြည့်စေချင်လို့ ပို့ပေးခဲ့တာ ဆိုတဲ့ အသိနှင့် အဲ့ဒီ ဗီဒီယိုလေးကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ကြည့်ပေးနေခဲ့ပါသည်။ သူမ ထို ဗီဒီယို လေးကိုကြည့်နေစဉ်မှာဘဲ မမ ဟုခေါ်သော နောက်ကောင်လေး တစ်ယောက် က နုတ်ဆက်လာပြန်ပါသည်။ သူမ စိတ်တွေက ဒေါသအရှိန် သံသယအရှိန် နှင့် ကြောက်လှန့်မှု အရှိန်တွေ ကြောင့်ပါ ရှုပ်ထွေး နောက်ကျိနေပါတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုကောင်လေးအား “သွားတော့ ငါ့ကို ဘာစကားမှလာမပြောနေနဲ့ ငါအိပ်တော့မယ်” ဟု ခပ်တင်းတင်း ပြောလိုက်တော့သည်။
ထိုကောင်လေးက သူမကို “ မမ အိပ်ချင်ရင်လည်း အိပ်ပါ ဒါဆိုရင် လည်း နောက်နေ့မှဘဲ ကျွန်တော်တို့ အကြောင်းတွေ မမကို အမှန်အတိုင်း ပြောပြပါတော့မယ် ” ဟုဆိုလာတော့ သူမ အလွန်ဘဲ စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဆိုသော အသုံးအနှုန်းက တစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ဘဲ အများကို ရည်ညွန်းသည့် စကားလုံး မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် သူမ က“ ငါမအိပ်တော့ဘူး စိတ်ဝင်စားတယ် ပြောပြစမ်း အမှန်အတိုင်း ”ဟု ခပ်သွက်သွက်လေးရေးပြီး ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့သည်။ ထို့နောက်မှာတော့ သူက “မမ လုံးဝ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ကျွန်တော် အရင်ဆုံး တောင်းပန်ပါတယ် ပြီးတော့ ဘလော့လည်း မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ ” ဟုဆိုကာ ဆက်မပြောသေးဘဲ ရပ်နေသည်။ သူမက “ဆက်ပြော ငါစောင့်နေတယ်”ဟု ပြောလိုက်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စကားလုံးတွေကို စောင့်မျှော် နေမိပါတော့သည်။ အတန်ကြာတော့ သူက “ ဒီနေ့ မမ ဘလော့ လုပ်လိုက်တဲ့ တစ်ယောက်ရယ် မမ ကသား လို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်ရယ် ကျွန်တော်ရယ် ကတစ်ခန်းထဲ အတူနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ။ မကြီးလို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက် နဲ့ အပျိုကြီးလို့ခေါ်တဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ တစ်ခြားအခန်းမှာ နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ မမရဲ့ ဘုကလန့် စကားတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး စချင်ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီလို လုပ်ခဲ့မိကြတာပါ ။ ပြီးတော့ မမက VZO နဲ့ ချက်မယ်ဆိုလည်း လက်မခံ၊ ဂျီတော့နဲ့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း အမြဲငြင်းနေတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက မမကို ကောင်လေးတစ်ယောက်လို့လည်း ထင်မိခဲ့ကြပါတယ်။ မမနဲ့ စကားတွေပြောတာကြာလာတော့ မမရဲ့ စိတ်ထားလေးကိုလည်း သိလာသလို ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်တစ်မျိုး နှောက်ယှက်လို့ မမ အလုပ်ရှုပ် စိတ်ရှုပ် နေခဲ့ရတာတွေကိုလည်း အရမ်းလည်း အားနာခဲ့မိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမှန်အတိုင်းပြောပြီး ဝန်ခံကြတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို စိတ်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့နော်”ဟု ရှည်လျားစွာ ရှင်းပြလာပါတော့သည်။
ထိုစကားလုံးများသည် သူမကို လှောင်ပြောင်နေသလို ခံစားရပြီး ဒေါသ ကို အလိပ်လိုက်ထွက်စေခဲ့ပါတော့သည်။ သူတို့လေးတွေ အားလုံး ပေါင်းပြီးသူမကို အရူးလုပ်ကာ ကွယ်ရာတွင် သူမကို ဟားတိုက် ရယ်မော နေကြမည် လှောင်ပြောင်နေကြမည်ဟု သူမ ခံပြင်းစွာ တွေးမိလိုက်သည်။ ထို့နောက် သူမ ပါးစပ်က ဆဲမိလိုက်သလို လက်ကလည်း ဒေါသ အငွေ့အသက်တွေပါတဲ့ စကားလုံးတွေ ချရေးလိုက်မိပါတော့သည်။ “ ဘာ့ကြောင့် ဒီလို လုပ်ကြတာလဲ ငါက မင်းတို့အတွက် ဟားတိုက်လှောင်ရယ်စရာ အရူးတစ်ယောက် ငပေါကြီးတစ်ယောက် မင်းတို့ရဲ့ စကားဝိုင်းထဲက အမြည်းတစ်ခွက်ပေါ့ ဟုတ်လား ”ဟု နာနာကျည်းကျည်း ပြောမိလိုက်ကာ တစ်ဆက်တည်းမှာ “အားလုံး ကိုနုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ” ဟု ပြောပြီး ဆိုင်းအောက် လုပ်ဖို့ သူမ၏ လက်တွေ ရွေ့လျားလိုက်ပါတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် “ မမရယ် အားလုံးကို နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတာက ဘာကိုပြောနေတာလဲ။ မမ စိတ်ကျေနပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အားလုံးကို ဘလော့ချင်ရင်လည်း ဘလော့လိုက်ပါ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ကတော့ မမကို အမြဲအမှတ်ရပြီး ခင်နေကြမှာပါ ခု ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ အားလုံးရှိနေပါတယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးက ကမန်းကတန်း ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။
သူမ တွေဝေသွားမိပါတော့သည်။ သူတို့လေးတွေနဲ့ စကားတွေပြော ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်ရင်း ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသည့် အချိန်များကိုလည်း ဖြတ်ကနဲ သတိရလိုက်မိကာ ဆိုင်းအောက်လုပ်တော့မည့် သူမ၏လက်က အလိုလို ရပ်တန့်သွားတော့သည်။ ထို့နောက် ဘယ်တော့မှ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြ ဖြစ်ခဲ့သော သူမ၏ နာကျင် ကြေကွဲစရာ အဖြစ်အပျက်များကို သူတို့လေးတွေအား ရင်ဖွင့်ပြီး အားရပါးရ ငိုကြွေး မိလိုက်ပါတော့သည်။ တကယ်တော့ သူမက အက်ဆီးဒင့် တစ်ခုကြောင့် အောက်ပိုင်းသေနေသည့် အပြင် လူ့လောကတွင် ( ၆)လသာ အသက်ရှင်ခွင့် ရတော့မည့် သွေးကင်ဆာ ရောဂါဝေဒနာကို အပြင်းအထန် ခံစားနေရသော သူ တစ်ယောက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ သူမ၏ ချစ်သူမှာလည်း အက်ဆီးဒင့် မဖြစ်ခင်၊ ရောဂါဒေနာကို မခံစားရသေးခင် အချိန်တွေက ချောမောလှပနေသေးသော သူမကို အလွန်ချစ်ကာ ဂရုတစိုက်ရှိနေခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတော့ အောက်ပိုင်းသေ၍ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ပြောင်းလဲလာသော သူမ၏ ဟောက်ပက်ပက် မျက်လုံးများ ကျိုးတိုးကျဲတဲ ဆံပင်များ ပိန်လှီကျုံနွဲ့ နေသော ခန္ဓာကိုယ် နှင့် ဝီးလ်ချဲပေါ်မှာသာ ရှိနေတတ်သော သူမကို အပြီးတိုင် စွန့်ခွာသွားပြီး တစ်ခြားသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် လက်ထပ်သွားခဲ့ပါတော့သည်။
ကံတရားက သူမကို မညာတာ အငြိုးတကြီး နိုင်လွန်းလှသည်။ သေဆုံးဖို့ကိုတောင် နှလုံးသားတစ်ခုလုံး ကွဲကြေပြီး စောင့်နေရမဲ့ အဖြစ်မျိုးကို ရက်ရက်စက်စက် ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူမခံစားရသော ဒေနာတွေနှင့် စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ကို ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် မေ့ဖျောက်ထားနိုင်ဖို့ ချောကလက် မြို့တော်လေးထဲမှာ လည်ပတ်ရင်း ချက်တင်ထိုင်ကာ မတွေ့ဘူး မမြင်ဘူးသော သူများနှင့် စကား ပြောခြင်းကို စတင်ခဲ့မိခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ချက်တင် ထိုင်သောအခါ သူမ အကြောင်း မေးကြသည်ကို ပြောပြနိုင်သော ခွန်အားမရှိသည့်အပြင် သူမ ဘဝကို သူမ စိတ်ပျက်အားငယ် ကြောက်ရွံမိနေသည့် အတွက်ကြောင့် ပြောလိုက်သော သူမ၏ စကားများမှာ တဘက်လူ အတွက်တော့ မလှမပ ဘုကလန့် များသာဖြစ်စေခဲ့တော့သည်။ ထိုအကြောင်းတွေကို သူမ က နာကြည်းစွာ ချရေးပြီး သူတိုလေးတွေကို ပြောပြလိုက်တော့ ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ အတန်ကြာသည့်အထိ စကားလုံးတွေ ရပ်နားကုန်သည်။ သူမ ကိုယ်တိုင်လည်း ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး သည်းထန်စွာ ငိုကြွေးနေမိပါတော့သည်။
ထို့နောက် ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ “ မမ....ရယ် ” ဆိုသည့် စကာလုံးလေးကို မျက်ရည်တွေကြားမှာ သူမ မှုန်ဝါးဝါးတွေ့လိုက်ရလိုက်သည်။ သူမ က “ ငါ့ အကြောင်း ဘာသိချင်ကြသေးလဲ မေးကြလေ။ သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ မှန်သမျှ အကုန်သာမေးကြ အားလုံးဖြေမယ်” ဟု နာနာကျင်ကျင် ပြန်ပြောလိုက်ပြီး သူတို့လေးတွေရဲ့ မေးလာမည့် စကားလုံးများကို ငိုကြွေးကာ စောင့်နေလိုက်တော့သည်။ အတန်ကြာတော့ “မမ ရယ်…. တော်ပါတော့ မပြောပါနဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို ခွင့်လွတ်ပါ တောင်းပန်ပါတယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ မမကို ဂျီတော့နဲ့ စကားပြောပြီး တောင်းပန်ချင်လို့ပါ ခွင့်ပြုပေးပါနော် ဒီဂျီတော့ကနေ အသံနဲ့ ပြောခွင့် မရဘူးဆိုရင်လည်း မမကို ဆက်သွယ်လို့ရမဲ့ ဖုန်းနံပတ်လေးတော့ ပေးပါနော် ။ မမရဲ့ အသံကိုလည်း ကြားပါရစေ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလည်း မမနဲ့ စကားပြောချင်နေကြသလို အားလုံးကလည်း အရမ်းကို တောင်းပန်ချင်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီ ဆန္ဒလေး တစ်ခုကိုတော့ လိုက်လျောာပေးပါ မမ ရယ် ” ဆိုသည့် စကားလေး ကို တွေ့လိုက်ရတော့ သူမ စိတ်အနည်းငယ် ပျော့ပြောင်းသွားခဲ့ပြီး သူမ၏ ဖုန်းနံပတ် လေးကို ပြောပြလိုက်ပါတော့သည်။
၅ မိနစ်လောက်နေတော့ သူမ၏ လက်ကိုင်ဖုန်း အသံမြည်လာပါသည်။ သူမ ဖုန်းကို တုန်ယင်စွာ လှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး ငိုသံဖြင့် ထူးလိုက်မိသည်။ တစ်ဆက်တည်း “ မမ...ကျွန်တော်တို့ပါ ခု ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး ဖုန်းနားမှာ ရှိနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ခွင့်လွတ်ပေးပါ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျား” ဆိုသည့် အသံလေးတွေကိုပါ ကြားလိုက်ရသည်။ သူမ စကားပြန်မပြောနိုင်သေးဘဲ ငိုကြွေးနေမိသည်။ သူမ ငိုသံ ကြားရတော့ သူတို့ ပိုပြီး စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားကြကာ တိုးညှင်းဖျော့တော့သော အသံလေးဖြင့် “ မမ ရယ် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက မမနဲ့အတူ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ ကိုလည်း ဘဝမှာ ဘယ်တော့မှ မေ့ပြစ်လို့ မရနိုင်တော့တဲ့အထိ အမှတ်ရ နေကြတော့မှာပါ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး မ နဲ့ ထပ်တူ နာကျင် ခံစားနေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့မိတာတွေ ကိုလည်း တကယ်ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲနဲ့ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း မမရဲ့ တကယ့်မောင်လေး အရင်းတွေလိုဘဲ သတ်မှတ်ပေးပါ။ မမ မသိတာတွေကို ကျွန်တော် တို့ကို မေးနိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ နားမလည်တာတွေကိုလည်း မမကို မေးပြီးတိုင်ပင် ကြမယ်နော် ။ နောက်ပြီး အစ်မတစ်ယောက်ကို မောင်လေးတွေက ဆိုးနွဲ့သလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့လည်း ဆိုးနွဲ့ပါရစေ ခွင့်ပြုပါနော် ” ဟု ဆိုလာသည်။ သူမ စကားပြန်မပြောနိုင်သေး ဆို့နင့်စွာ ငိုကြွေးဆဲ။ ထို့နောက် “ မမ ရယ် စကားလေးတော့ ပြန်ပြောပါဦးနော်။ ဒီမှာ မမရဲ့ မြေးလေး သားသားက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီး စကားတောင် ပြောနိုင်တဲ့ အင်အားမရှိလို့တဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီး တွေဝေနေတယ် ။ မ မှာ ဒီလို နာကျင်မှုတွေ ရှိနေမှန်းမသိလို့ စခဲ့နောက်ခဲ့မိတာကို အပြစ်မမြင်ပေးပါနဲ့နော် ။ မရယ် မငိုပါနဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ တကယ်ပဲ ခံစားရလို့ပါ ” ဟု ပြောလာသည်။
ထို့နောက် စကားပြောသံလေးတွေ ခေတ္တသိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပြီး သူမ နားထဲသို့ သာယာငြိမ့်ညောင်းသော ဂီတာသံလေး တစ်ခု ဖုန်းထဲမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလာပါတော့သည်။ သူမ အာရုံစိုက်ပြီး ငြိမ်သက်စွာ နားထောင်နေမိသည်။ နောက်တော့ ဂီတာသံလေးနှင့်အတူ ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့ ဖြေသိမ့်လိုက် သီချင်းလေးကို သံပြိုင်သီဆိုနေကြတဲ့ သူတို့ရဲ အသံလေးတွေကိုပါ တစ်ဆက်တည်း ကြားလိုက်ရပါတာ့သည်။ သူမ နှလုံးသွေးတွေ တဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာပါသည်။ ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေက ကြည်နူးမှု အသွင်သို့ ပြောင်းလဲလာကာ အေးစက်နေတဲ့ သူမရဲ့ နှလုံးသားက နွေးထွေးတဲ့ အငွေ့အသက်လေးတွေ ခံစား လိုက်ရလေတော့သည်။ “ အိုး.....ကြည့်စမ်း ဘယ်လောက် ကြည်နူးဖို့ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးလဲ ။ ဘဝမှာ ဒီလို အဖြစ်အပျက်လေးတွေနဲ့ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ အဖော်မွန်တွေ၊ မောင်လေးတွေ ရရှိလာလိမ့်မည်ဆိုတာ သူမ ဘယ်တုန်းကမှ ထင်မှတ်မထားခဲ့မိပါ ။ ဒီလိုဆိုတော့လဲ မျော်လင့်ချက်မဲ့ပြီး သေဆုံးဖို့ကိုသာ စောင့်မျော်နေရသူ သူမ အတွက် ကံကြမ္မာက အကောင်းမွန်ဆုံး လက်ဆောင်လေးကို အချိန်မှီ ယူဆောင်လာပေးခဲ့သည်ပေါ့” ဟု သူမ ကြည်နူးစွာ တွေးလိုက်မိသည်။
ထို့နောက် သူတို့လေးတွေ အားလုံးနှင့် ဖုန်းထဲမှာ စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမ၏ မျက်ရည်များလည်း ခမ်းခြောက်သွားခဲ့ရလေပြီ။ အချိန်တွေ ဘယ်လိုကုန်ဆုံးသွားမှန်း သတိမထားမိခဲ့။ ပြူတင်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တော့ အလင်းရောင်က ကြိုလင့်နေပြီ ။ သူမ အတွက်တော့ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သော တစ်ညတာဟာ လှပလွန်းပြီး အဖိုးထိုက်တန်လွန်းလှသော ည၊ သူမဘဝအတွက် ပျော်ရွှင်စရာ ကြည်နူးစရာ နေ့သစ်လေးတွေ ဆောင်ယူလာပေးခဲ့သော ညအဖြစ် ဘဝမှာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတော့မည်မှာ အသေအချာဘဲ ဖြစ်လေသည်။ သူမရဲ့ ရှင်သန်နေထိုင်ချိန်တွေ အဓိပ္ပါယ်ရှိလာသလို အထီးကျန်ဆန်သော ခံစားမှုများလည်း တဖြေးဖြေး မှုန်ဝါးလာခဲ့တော့သည်။ချောကလက်မြို့တော် လေးထဲမှာ ပျော်ရွှင်စရာ လည်ပတ်နိုင်သလို သူငယ်ချင်းများနှင့် မြို့တော်လေးထဲမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ရင်းနီးပွင့်လင်းစွာ ငြင်းခုန်လို့ရသည်။ ခင်မင်လို့ရသည် ရင်ဖွင့်လို့ရသည် မဟုတ်ပါလား။ ထိုအတူ သူမတွင် အရမ်းချစ်ရသော အဖော်မွန် မောင်ငယ်လေးများနှင့်လည်း ည အစောပိုင်းတွေမှာလည်း ချက်တင်ထိုင်ပြီး ဂျီတော့ပေါ်မှာ စကားတွေ များခဲ့ကြသလို ကွန်ပျူတာ ပိတ်လို့ အိပ်ခါနီး အချိန်တွေမှာလည်း ညတိုင်း မပျက်မကွက် ဖုန်းထဲကနေ ဂီတာတီးပြီး သီချင်းဆိုပြကြသည်ကို ကြည်နူးစွာ နားထောင်နေခဲ့ရပါသည်။
သီချင်းဆို၍ ပြီးလျှင်တော့ သူတို့လေးတွေ အားလုံးနှင့် တစ်ယောက်ချင်းစီ စကားပြောရပါသေးသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို မမေးမိ စကားမပြောခဲ့ မိလျှင်တော့ ထို တစ်ယောက်က သူမကို စိတ်ကောက်ပြီး “သူ့ကို မခင်လို့ ဂရုမစိုက်လို့ စကားမပြောတာ မမေးတာ ”ဟုဆိုပြီး ရစ်ပါတော့သည်။ ထိုသို့ အရစ်ခံရတော့ သူမ ကစိတ်မဆိုးဘဲ ပိုပြီးဝမ်းသာ ကြည်နူးမှု ဖြစ်ရသည်။ သူမ အပေါ်ထားရှိသော သူတို့၏ ခင်မင်မှုလေးတွေကိုလည်း သူမ တကယ်ပဲ တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးခဲ့မိလေသည်။ သူမ၏ ခြောက်သွေ့အထီးကျန်နေသော ဘဝ နှင့် ၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ပြီး သေဆုံးဖို့ အချိန်ကို ဝေဒနာတွေဖြင့် ခံစားပြီး စောင့်မျှော်နေရသူ သူမ အတွက်တော့ အလိုအပ်ဆုံး အရာက ရွှေ ငွေ စည်းစိမ်တွေ မဟုတ် ၊ စစ်မှန်သော မေတ္တာတရားနှင့် ကြင်နာ ဂရုစိုက်မှုလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတော့သည်။
သူမ ပိုင်ဆိုင်ရသော အချိန်တွေကလည်း တဖြေးဖြေးနှင့် ကုန်ဆုံးလာ ခဲ့လေပြီ။ ထိုသို့ စိတ်ထားကောင်း၍ မွန်မြတ်သော သူမ၏ မောင်ငယ်လေးများကို မသေခင် အချိန်လေးမှာ မြင်တွေ့သွားခဲ့ရရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်လေမလဲဟု တွေးမိလိုက်တော့ သူမ၏ ရင်ဘတ်က ဆစ်ကနဲ နာကျင်လာမိသည်။ ထို့နောက် ကျိုးတိုးကျဲတဲ ဖြစ်နေသော ဆံပင်များကို လက်ကအလိုလို စမ်းမိပြီး ဟောက်ပက်ပက် ဖြစ်နေသည့် မျက်လုံးများက ပိန်လှီချိနဲ့နေသော သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ ဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်မိသည်။ ထို့နောက် သူမ အသံမထွက်ဘဲ တစ်ချက် ရှိုက်မိလိုက်ပါတော့သည်။
ဒီပို့လေးက ဆွေလေး ရေးတာမဟုတ်ပါ။ချောကလက်မြို့တော်မှ မြို့သူတစ်ယောက်ရေးထားသော ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ ဘလော့မောင်နှမ များလဲ ဖတ်စေချင်လို့ ကူးပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ။
ZT 10 November 2010 at 19:19
ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး။ :)
အဖြူရောင်နတ်သမီး 11 November 2010 at 00:03
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 11 November 2010 at 03:35
ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားတာ ကောင်းလွန်းတော့ တကယ်လို့တောင် ထင်မိတယ်နော်
blackroze 28 November 2010 at 11:56
Nawe Kabyar 22 April 2013 at 06:25
so so poor...
I let my tear to flow over my face... this let me sad..
ခရမ်းပြာအတွက် ချောကလက်ကပေးသော နောက်ဆုံးပျော်ရွှင်မှု...